Ilkaha caddeeya Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad | Shiinaha Ilkaha caddeeya Soo-saareyaasha nalka
Mashiinka ilkaha oo ilkaha ku shaqeeya oo ilka caddeeya
Ilkaha sare ee laambad caddeeya waxay leeyihiin 60W awood sare, heerkul joogto ah si loo helo khibrad wanaagsan, 12pcs Osram light buluug. wax muhiim ah, waad awust kartaa awoodda iyo iftiinka iyadoo loo eegayo xaaladda ilkaha oo kala duwan.
Seddex il oo il iftiin taabasho ah oo il cadeeya aaladda caddeysa
Mashiinkaani ilkaha caddeeya mashiinkiisu waa naqshad moodel ah, waxay leedahay shaqo taabasho screeen, fudud oo la hawlgeliyo, waxayna leedahay il iftiin oo kala duwan, waxtarna u leh daaweynta ilkaha caddeeya.
kulul iibinta ilkaha light buluug mashiinka caddeeya
Mashiinkaan moodada ilka caddeeya waa mid heer sare ah, waanu iibinay sanado badan, tayada waa wanaagsan tahay, sicirkuna waa mid dhaqaale, wuxuu leeyahay 8pcs light light buluug ah, awooda waa 40w, waxaan ku dari karnaa astaantaada astaanta mashiinka, waxaan ayaa ku siin kara taageero haddii aad rabto inaad noqoto qeybiyeyaasha maxalliga ah, fadlan noo soo dir baaritaan haddii aad xiiseyneyso, waxaan uga jawaabi doonnaa xoog
Laydhka ilkaha ilkaha ilkaha caddeeya
TE300 waa nooc casri ah, wuxuu leeyahay 3 nooc oo iftiin laydh ah, 2pcs light led light, 5pcs buluug light and 8pcs purple led light. Dhererka haynta laambadda iyo gacanta laambadku waa la hagaajin karaa, Hawlgalku waa ku habboon yahay.
Ilkaha moodeelka moodeelka ilka caddeeya
Ilkahan caddeeya laambaddu waa nooc aasaasi ah, 12pcs led led, naqshad aan toos ahayn, hawlgal fudud. ka sii muhiimsan, mishiinkan waxaa lagu qalabeeyaa sanduuqa mobiilka ee aluminium, waxaad u qaadan kartaa mashiinka meel kasta, Waad u haysan kartaa adeegyada guriga macaamiishaada, Waxay ka dhigeysaa adeegga ilkaha caddeeya mid ku habboon.
Ilkaha nalka ilkaha mashiinka caddeeya
Ilkaha naqshadda qurxinta leh ee laambadda caddeeya, 8pcs ayaa horseeday iftiin buluug ah, Jir dhaqaaq ah, waxaad hagaajin kartaa dhererka madaxa hadba baahida aad u qabto.Waxay leedahay furaha xakamaynta taabashada, waad awri kartaa awoodda, oo waxaad dejin kartaa waqtiga daaweynta.
ilkaha midabka madow iftiinka caddeeya
Mashiinkaan ilkaha caddeeya ee mashiinka caddeeya waa mid heer sare ah, waxaan iibinnay sannado badan, tayada iyo jawaabcelintuna way wanaagsan tahay, 40w iyo 8pcs laydhadh horseed ah, xirfadle ayaa loo isticmaalaa ilkaha caddeeya ee ku yaal saloon ama rugta caafimaadka ilkaha. Waxaan raadineynaa wakiillo adduunka oo idil.